Dreame D9 Max, famakafakana ny mpanadio banga robot farany indrindra | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 30/12/2021 10:59 | General, hevitra
Ny mpanadio banga robot dia lasa iray amin'ireo trano "tsy maintsy" indrindra mifanaraka amin'ny teknolojia farany. Ireo dia nandalo fivoarana sy fanatsarana lehibe teo amin'ny fampisehoana sy ny vokatra izay nahatonga azy ireo ho singa saika mahaleo tena izay manamora ny fiainantsika andavan'andro.
Amin'izao fotoana izao Omeo anarana aho tsy afaka nanadino ny fanendrena, manolotra vahaolana tsara maro miaraka amin'ny sanda tsara ho an'ny vola amin'ity karazana vokatra ara-teknolojia ity. Manadihady ny Dreame D9 Max vaovao izahay, mpanadio banga robot manana vokatra tsara sy vokatra tsara, Fantaro miaraka aminay dia ho azonao atao ny mandanjalanja raha tena mendrika ny fividiananao izany, na tsia.
2 Toetra mampiavaka ny teknika
3 Fizakan-tena sy fampiharana
4 Ny teknolojia ampiasaina sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Toy ny tamin'ny fotoana hafa sy ny sisa amin'ny vokatra, Dreame dia manamarika kihon-dalana eo amin'ny famolavolana sy ny fananganana ny kalitaon'ny vokatra amin'ny fanajana ny hafa, miantoka fa ny vidiny fanitsiana dia tsy tsikaritra eo amin'ny lafiny kalitao. Miatrika mpanadio vacuum robot miaraka amin'ny taham-pivarotana mahazatra izahay, miloka amin'ny refy 35 × 9,6 izay hijanona eo amin'ny 3,8Kg, Na dia marina aza fa ny teny lanja amin'ireo fitaovana ireo dia tsy dia manan-danja loatra, satria tsy hitondra azy ireo izahay. Ny vidiny dia hihozongozona manodidina ny 299 euros any amin'ireo teboka fivarotana lehibe. Raha mila fihenam-bidy fanampiny ianao dia afaka mampiasa ny tapakila DREAMED9MAX.
Dimensions: 35 × 9,6 santimetatra
lanja: 3,8 Kg
Loko azo: Mainty manjelatra sy fotsy manjelatra
Afangaro ny fanadiovana sy fikosehana
Izy io dia manana borosy afovoany nohamafisina eo amin'ny farany ambany izay manambatra ny teknolojia isan-karazany, ary koa ny borosy tokana. Eo an-tampony dia hitanay ireo bokotra fanaraha-maso an-tànana telo lehibe, ny "hump" mahazatra ankehitriny. napetraka amin'ny robot rehetra miaraka amin'ny teknolojia laser sy fanitsiana ny tanky rano. Amin'ny lafiny iray, ny tanky maloto dia ao ambadiky ny varavarana any amin'ny faritra ambony, izay matetika no misy azy ireo amin'ny vokatra Roborock sy Dreame tsy tapaka. Araka ny hitanao amin'ny sary dia nodinihinay ny modely mainty.
Toetra mampiavaka ny teknika
Mikasika ny fonosana, Dreame dia miasa tsara amin'ity fizarana ity, manome singa tsotra nefa ilaina amin'ity fotoana ity: Fitaovana, toby famandrihana sy famatsiana herinaratra, borosy sisiny, fitoeran-drano misy mop, fitaovana fanadiovana (ao anatin'ny robot, misy ny fitoeran'ny fako) ary ny boky fampianarana. Nahita zavatra fanoloana aho toy ny mops bebe kokoa, sivana fanoloana na borosy anilany fanoloana.
Ny fitaovana dia manana fifandraisana Wifi, fa toy ny mahazatra amin'ireo fitaovana ireo dia tokony hotadidintsika fa hifanaraka ihany izy io miaraka amin'ny tambajotra 2,4GHz. Izany hoe, mahita rafitra nLDS 3.0 Laser LiDAR Navigation tena mahomby, izay miaraka amin'ny anao 570ml ho an'ny loto ary 270ml ho an'ny rano na ranon-javatra manadio izay tiantsika homena, raha toa ka mifanaraka amin'ny fitaovana sy ny gorodonantsika ilay izy, zavatra tokony hojerentsika ny boky torolalana teo aloha.
Raha ny momba ny herin'aratra, Dreame dia mitatitra momba ity modely 4000 Pascal pro ity, hery somary avo sy mahomby raha jerena ny fampitahana amin'ny vokatra hafa amin'ny marika mpifaninana sarobidy indrindra. Raha jerena ny herin'ny suction dia hahita feo mivoaka eo anelanelan'ny 50db sy 65db isika, izay mahatonga azy ho mpanadio banga robot mangina ihany koa raha dinihina ity fizarana manokana ity. Ny tabataba dia hiankin-doha amin'ny haavon'ny herin'aratra efatra samy hafa azontsika fehezina amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Fizakan-tena sy fampiharana
Manaova drafitra marani-tsaina
Mamorona sarintany manokana
Diovy ny efitrano manokana
Manadio faritra araka izay tianao
Mandràra ny fidirana amin'ny toerana sasany
Manana, ahoana no mety ho raha tsy izany, synchronization amin'ny Amazon Alexa, ka ho mora kokoa ny andavan'andro raha manontany fotsiny ny mpanampy virtoaly miasa. Ny asa fampifanarahana sy fitantanana ny fitaovana dia hotanterahina amin'ny alàlan'ny fampiharana Mi Home azo alaina ho an'ny Android fa ny iOS. Hiasa na dia tsy ao an-trano aza isika. Misaotra ny smartphone sy ny App manokana, afaka mifehy ny fanadiovana ny trano na aiza na aiza isika, miditra amin'ny sarintany ary mitantana ny faritra fanadiovana.
Ny teknolojia ampiasaina sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Mivory ao amin'ny Dreame D9 isika Max ireo teknolojia lehibe novolavolain'i Dreame amin'ireo karazana vokatra ireo, toy ny a rafitra fanaraha-maso ny hamandoana mba hitantana ny rano ampiasaina amin'ny fanadiovana sy tsy hanimba ny parquet, ary koa ny marani-tsaina suction rafitra Mampitombo ny karipetra izay hanavaka ny karipetra amin'ny gorodona mafy mba hifehezana ny hamafin'ny mpanadio banga.
Ahitana sivana HEPA avo lenta.
Ny traikefanay dia tena tsara amin'ny resaka fanadiovana, miaraka amin'ny hery, tsy misy tabataba ary lalana tsara novolavolaina tamin'ny alàlan'ny scanner LiDAR, toy ny mahazatra, ny fikikisana dia mop mando kokoa izay amin'ny toe-javatra sasany dia afaka mamorona marika hamandoana amin'ny tany miankina amin'ny gorodona. fitaovana izay mamorona azy, ka manoro hevitra ny mpanamboatra. Azonao atao ny mahazo azy amin'ny vidiny izay manomboka amin'ny 299 euros miaraka amin'ny tolotra manokana, lasa safidy hendry amin'ny lafiny kalitao / vidiny.
Navoaka tamin'ny: Desambra 30 amin'ny 2021
Fanovana farany: January 4 amin'ny 2022
Smart sarintany sy fahombiazana ambony
Mitabataba kely sy vokatra tsara
Ny fikikisana indraindray dia mamela marika
Tsy hita fa misy singa fanampiny hosoloina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Dreame D9 Max, famakafakana ny mpanadio vacuum robot farany indrindra